အမေးအဖြေများ - Ningbo ရောင်းအားပြည်ထောင်စု IMP & Exp Co. , Ltd
၁။ ခရစ်စမတ်နှင့်ပါတီပွဲများ ၂။ ကစားစရာများ။ ပလတ်စတစ်နှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများ ၄။ ကြွေနှင့်ဖန်ထည်ပစ္စည်းများ ၅။ ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်ပရိဘောဂများ 6. ပရိဘောဂနှင့်အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ 7. သားရေဖိနပ်များနှင့်ဖိနပ်များ ၈ ။ ပစ္စည်းသုံးခြင်း ၁၁။ အဝတ်အထည်များနှင့် ၀ တ်စားဆင်ယင်ခြင်း ၁၁။ အိပ်ရာခင်းများနှင့်အိပ်ရာခင်း ၁၂။ အထည်အလိပ်ပစ္စည်းများ ၁၃။ အားကစားပစ္စည်းများ ၁၄။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ ၁၅။
Yiwu သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးကုန်သွယ်ရေးအချက်အချာဖြစ်သည်။ ။ အဲဒီမှာသင်လိုချင်တာမှန်သမျှရှာနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြည်နယ်တိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များရှိသောကြောင့်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် Yiwu, Ningbo, Shantou, Guangzhou ရှိရုံးခန်းများကိုဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
1. သင်လိုအပ်ရင်းမြစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ပို့ quotation အ
2. Yiwu Market ကလမ်းညွှန်နှင့်စက်ရုံစာရင်းစစ်
4. ကုန်ပစ္စည်း repacking နှင့်ဒီဇိုင်း
တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတင်သွင်း 7. ကမ်းလှမ်းချက်
၃။ Yiwu ကိုသွားတုန်းကဘယ်လိုအတူတူအလုပ်လုပ်ကြတာလဲ။
၂။ သင်နှင့်အတူလိုက်ပါရန်နှင့်စျေးသို့မဟုတ်စက်ရုံတွင်အလုပ်လုပ်ရန် ၀ န်ထမ်း ၂ ဦး ကိုစီစဉ်ပေးပါမည်
။ ၃။ အချက်အလက်အားလုံးကိုညတွင်ပေးပို့ပါမည်သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းတွင် နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ။
သင် Yiwu မထွက်ခွာမီမှာကြားချက်များကိုစစ်ဆေးအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်၏ရုံးခန်းသို့သွားသင့်သည်။
ကျနော်တို့ကြိုတင်မြှစီစဉ်ကဲ့သို့: ဟိုတယ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ထမ်း, tools များ (တိပ်, မှတ်စုစာအုပ်, ကင်မရာစသည်တို့ .. ), စက်ရုံသတင်းအချက်အလက်, သတင်းအချက်အလက် sourcing ထုတ်ကုန်။ clients Yiwu အတွက်အကျင့်ကိုကျင့်စိတ်မပူပါနဲ့။
၄။ သင်၏စျေးနှုန်းသည် Alibaba သို့မဟုတ် China မှ Made မှပေးသွင်းသူများ၏စျေးနှုန်းထက်နိမ့်ပါသလား။
B2B ပလက်ဖောင်းမှပေးသွင်းသူများသည်စက်ရုံများ၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ ဒုတိယနှင့်တတိယအပိုင်းအလယ်အလတ်များဖြစ်နိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းအတွက်ရာနှင့်ချီသောစျေးနှုန်းများရှိပြီး၎င်းတို့သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ တရုတ်ဟာအရင်ကမသိသေးပေမယ့်နိမ့်သော်လည်းဈေးနိမ့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုးကားထားသောစျေးနှုန်းသည်ပေးသွင်းသူနှင့်အတူတူဖြစ်ပြီးအခြားလျှို့ဝှက်ကောက်ခံမှုနှင့်မတူကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကတိပေးသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများတွင်တည်ရှိနေသောအမျိုးမျိုးသောပေးသွင်းသူများထံမှကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ရန်သင့်အားပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းပါသည်။ ဤသည်မှာ B2B ပလက်ဖောင်းပေးသွင်းသူများသည်သာမန်အားဖြင့်လယ်ကွင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းကိုသာအဓိကထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
။ ဖောက်သည်များအားအမြန်၊ လေကြောင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ရထားလမ်း၊ FCL နှင့် LCL စသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။
၆။ သင်ထံမှအမှာစာများချသည့်အခါ MOQ ရှိပါသလား။
သိုလှောင်ရန်မလုံလောက်ပါကစက်ရုံများသည် MOQ ကိုထုတ်လုပ်မှုအသစ်အတွက်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။
၁။ အမှာစာပြီးနောက်၊ ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုး ၃၀% ကိုကျွန်ုပ်တို့အား deposti အဖြစ်ပေးချေရန်လိုအပ်သည်။ (ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးပစ္စည်းများသည်ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏ ၅၀% ကိုအပ်ငွေအဖြစ်ပေးချေရန်လိုအပ်သည်) ။
၂။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ၊ မည်သည့်ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းကို T / T, L / C, D / P, D / A, O / A ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရရရှိနိုင်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့! သင်ဝယ်ယူပြီးပါကကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအားသင်လိုအပ်သကဲ့သို့မလုပ်နိုင်ပါကထုတ်လုပ်မှုကိုတွန်းအားပေးရန်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်၊ တင်ပို့ရန်၊ တင်ပို့ရန်၊ အကောက်ခွန်ကြေငြာချက်နှင့် ၀ ယ်ယူရန်အတွက်သင်၏လက်ထောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုကြေးကညှိနှိုင်းလို့ရတယ်
9. သင်ဘာကြောင့်အရောင်းအ ၀ ယ် yiwu အေးဂျင့်လိုအပ်သည်
၁။ စက်ရုံများ၏ ၈၀% ကျော်တွင်ကိုယ်ပိုင်ပို့ကုန်လိုင်စင်
မရှိပါ။ ၂။ စက်ရုံအများစုသည်တရုတ်၌အသေးစားဝယ်လက်များနှင့်အလုပ်လုပ်သောစပိန်စကားနှင့်အင်္ဂလိပ်စကားပြော ၀ န်ထမ်းများအလုံအလောက်မရှိကြပါ။
4. ထို့ကြောင့်အေးဂျင့်အရောင်းအလိုအပ်နေသည်။ ကောင်းမွန်သောတစ်နေရာတည်းဝယ်ယူသည့်ကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်တရုတ်နိုင်ငံမှ ၀ ယ်ယူခြင်းအတွက်အန္တရာယ်များကိုလျော့နည်းစေရုံသာမကရှာဖွေခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း၊ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အချိန်၊
၁။ သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်ကိုယ်စားလှယ် ၂၃ နှစ်ကျော်လုပ်သက်
၂။ ၀ န်ထမ်း ၁၂၀၀ ကျော်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းအများစုသည် ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ သူတို့သည်စျေးကွက်ကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးမှန်ကန်သောပေးသွင်းသူများအားအမြဲတမ်းထိရောက်စွာရှာဖွေနိုင်သည်။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်တရုတ်စက်ရုံ ၁၀၀၀၀ ကျော်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ ကျော်မှဖောက်သည် ၁၅၀၀ ကျော်နှင့်တည်ငြိမ်သောကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သောအမေရိကား, ဘရာဇီး, ဗင်နီဇွဲလား, မက္ကဆီကို, ကိုလံဘီယာ, အာဂျင်တီးနား, စပိန်, ပီရူး, ပါရာဂွေးနှင့်ဒါမှအပေါ်အဖြစ်
Yiwu တွင်တည်ရှိပြီး4ကိုလည်း Yiwu, Ningbo, Shantou, ကွမ်ကျိုးအတွက်ရုံးရှိ
6 ၅၀၀+ အင်္ဂလိပ်နှင့်စပိန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောတတ်သည့် ၀ န်ထမ်းများကျွန်ုပ်တို့
11. Yiwu မြို့ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။
အဆိုပါ Yiwu ရှန်ဟိုင်းနှင့်ဟန်ကျိုးနှင့်အတူအလွန်နီးသည်ကိုသင်ထားဖို့လိုပါလျှင်, ငါတို့သည်လည်းလေဆိပ်ကနေသင်တို့ကိုကောက်ဖို့ကားစီစဉ်နိုင်, ရှန်ဟိုင်းကနေမြန်နှုန်းမြင့်ရထားသို့မဟုတ်မြို့ဘတ်စ်ကားယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ yiwu ကိုလည်းကွမ်ကျိုး, Shenzhen, shantou နှင့်ဟောင်ကောင်ကနေလေယာဉ်လိုင်းရှိသည်။
၁၂။ ဝီ၏ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
Yiwu မြို့သည်အလွန်လုံခြုံပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများစွာသည်ညသန်းခေါင်အချိန်၌ပင်လမ်းလျှောက်ထွက်လာကြလိမ့်မည်။ သူတို့ကဘားကိုသွားပြီးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပါတီပွဲတက်ပါလိမ့်မယ်။
အတွေ့အကြုံ 23 နှစ်ရှိသော ထိပ်တန်း China Sourcing Agent သည် သင့်အား ရင်းမြစ်မှ ပို့ဆောင်ခြင်းအထိ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
လိပ်စာ- အမှတ် 531 Zongze North Road, Yiwu China